Andriamifidisoa Zo · Febroary 2012 · Global Voices teny Malagasy
Andriamifidisoa Zo · Febroary, 2012
Translation Editor · Nanomboka nandika tamin'ny 11 Septambra 2007 · 2575 Lahatsoratra
Lahatsoratra farany an'i Andriamifidisoa Zo tamin'ny Febroary, 2012
Makedonia: Mikatona Ny Famoahana Mangarahara An-Tserasera ny Fahalotoan'ny Rivotra Ao Skopje
Eoropa Afovoany & Atsinanana10 Febroary 2012
Nitsaha-ketrika nanomboka ny fiandohan'ny taona 2012 ny rafi-panaraha-maso antserasera "Fisefoana Skopje" mampafantatra ny olona ny taham-pahalotoan-drivotra. Mandika antsoratra ny fanazavan'ny ONG iray ao an-toerana ny tokony hanarenana ity fitaovana sarobidy ity ho antsika i Filip Stojanovski.
Malezia: Fikambanana Miaro ny Zon'Olombelona Amin'ny Alalan'ny Lahatsary
Azia Atsinanana09 Febroary 2012
Ny KOMAS dia fikambanana iray any Malezia izay mampiasa ny famokaran-dahatsary ho fitaovana hanabeazana sy hiarovana ny zon'olombelona eo amin'ny sehatry ny tsy fanavakavahana, ny maha-olompirenena, ny fiarovana eny ifotony ary amin'ny fitaizana momba ny fifidianana mbamin'ny famoronana lahatsarin-tahirinkevitra.
Isiraely: Ny Lainga, Ny Marina ary ny Meme (momba ilay Miaramila sy ilay Tovovavy)
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana05 Febroary 2012
Nivezivezy tany amin'ny tranonkala sosialy any andro vitsivitsy lasa izay , ity sary eto ambany ity, izay ahitana miaramila manitsaka zazavavy kely, lazaina fa miaramila Isiraeliana sy zazavavy Palestianiana. Wesley Muhammad izay namoaka azy ity dia nilaza ho nahita azy ity avy tany an-kafa, ary manontany tena tamin'ny nahatonga azy ho nalaza...
Koety: Nanjakan'ny Herisetra Ny Fifidianana Parlemantera
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana04 Febroary 2012
Nahitana herisetra nandritra ny fifidianana antenimiera. Niteraka fahatezerana mpiray foko ka nahatonga fandorana ny tranolainy fanaovana fampielezan-kevitra ny fanavakavahana nataona kandidà iray antsoina hoe Mohammed Al-Juwaihel. Nampiasa ny fitaovam-pitateram-baovao marolafy i Mona Kareem.
Sénégal : Herinandro Mety Hampidi-doza Indrindra
Afrika Mainty02 Febroary 2012
Namoaka didy ny lisitry ny kandidà filoham-pirenena hotontosaina amin'ny 26 febroary ho avy izao ny Fitsaran-Dalampanorenana tamin'ny 27 janoary lasa teo. Nanaiky ny firotsahan'i Abdoulaye Wade ny "Loholona" dimy ary nandà ny firotsahan'ilay mpihira Youssou N’Dour, nolazaina fa tsy ampy ny sonia hahafahany mirotsaka hofidiana.
Filipina: Tsy Ekena Ny Hanoloana Ny Alaala Ho Tranombarotra
Azia Atsinanana02 Febroary 2012
Nitsena hetsika goavana avy amin'ny mponina iharany sy avy amin'ny fikambanana isan-karazany ny drafitry ny tranombarotra SM City Baguio ao avaratr'i Filipina hanongotra hazo an-jatony ka hanoloana azy ho tobim-piara sy toeram-pialamboly